Arsenal oo Ka Badisay Kooxda Manchester City “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Kooxda Manchester City ayaa lumisay fursad ay ugu dhawaan laheyd kooxda Chelsea oo hogaamineyso horyaalka ingiriiska,ka dib markii garoonkeeda Etihad Stadium ay 0-2 uga badisay kooxda Arsenal.
Ciyaaryahan Santi Cazorla ayaa qeybtii hore ee ciyaarta goolka koowaad oo rigoore ahaa u dhaliyay kooxda Arsenal,sidasi ayaana lagu kala nastay qeybtii hore ee ciyaarta.
Kooxda Manchester City oo raadineysa gool bareejo ah ayaa waxaa gool labaad kaga naxsaday ciyaaryahan Olivier Giroud.
Kooxda Manchester Citya ayaa waxaa hada shan dhicbood ka sareeya kooxda Chelsea oo hogaamineyso horyaalka ingiriiska,waxana ay labadooda isla ciyaari doonaan 31-bishan.
Kooxda Manchester Citya ayaa kaalinta labaad uga jirto kala horeynta horyaalka ingiriiska,waxana ay leedahay 47-dhibcood,halka kooxda Arsenal ay horyaalka uga jirto kaalinta shanaad,iyadoo leh 39-dhibcood.
Ergo ka socota Xeraale, Huurshe iyo dhaqanka Cadaado oo heshiis gaaray “SAWIRRO”